Duugga Sii Industrial Turos Pyrolysis Qalabka - Shiinaha NIutech Deegaanka
Caaga Pyrolysis Plant
Qashinka Sii Industrial caaga Pyrolysis Production Line
Turos Pyrolysis Plant
Industrial Turos Duugga Sii Pyrolysis Production Line
Oil Dhoobada Pyrolysis Plant
Industrial Sii Oil Dhoobada Pyrolysis Production Line
Industrial Rubber Qashinka Sii Pyrolysis Production Line
Duugga Sii Turos Pyrolysis Qalabka Warshadaha
Duugga Turos Pyrolysis Hab-Production qalabka
taayirrada duugga ah waxaa xoolo gelin chips taayirrada habboon iyo si joogto ah in la siiyo galay nuclear ee cadaadiska caadiga ah pyrolysis heerkulka hoos si wadajir ah ula baaruud heerkulka Hannaan kala iibsiga yar yahay iyada oo qalab ah ayaa caddeeyey kulul.
gaas saliid pyrolyst waxaa beddelay saliidda shidaalka iyo gaaska guban yar (dib u isticmaalka ka dib ku rugto) ka dib markii fractionation iyo qaboojinta dhex SEPARATOR saliid.
wax soo saarka adag madow carbon ceeriin iyo birta way kala tagi by SEPARATOR magnetic. The madow carbon cayriin si toos ah wareejin doonaa habka wax soo saarka madow ah carbon iyo madow fasalka warshadaha carbon ah waxaa laga heli doonaa ka dib markii halis ah hawlgaladii sida axdi qarameedka iwm ama heli doontaa noocyada kale ee wax kiimikada-qiimaha sare. steel ka soo soocay la iibin karin sida birta duugga ah.
gaaska guban kara lagu gebi ahaanba loo isticmaali doonaa sida shidaalka nidaamka ka dib markii habka ku rugto. habka kuleyliyaha waxaa uu aqbalayaa technology-warshadaynta kulaylka haraaga ah, kaas oo ilaa hadda lagu badbaadinayo isticmaalka tamarta iyo ku yar hoos u dhigaan qiimaha orodkii. gaas ayaa soo saaray line-soo-saarka ee lagu daahiriyaa doonaa si ay ula kulmaan heerka deegaanka markaas saaray.
nidaamka ama kaararka Turos (optional)
nidaamka heerkulka Constant kululaynta
nidaamka pyrolysis Continuous
nidaamka Carbon-soo-saarka madow (optional)
nidaamka u xoqdo gaaska gubta
nidaamka nadiifiskeeda u Gas
nidaamka muxaadaro Oil (optional)
Faa'iidooyinka Niutech Technology Deegaanka
Industrial joogto ah, dhex weyn, xoojinta tayada daaweynta iyo awoodda wax soo saarka.
Exclusive technology pyrolysis heerkulka yar yahay, isticmaalka yar yahay, kor u dhalid saliid iyo tayada, loo hubiyo in muddo dheer, hawlgal joogto ah oo joogto ah iyo wax soo saarka, si weyn ballaariyo qalabka * dari.
Exclusive anti-cocking, technology qaybinta kaamerada, awood wax ku siman kulul iyo? Gebi pyrolized, in gaari alaabta oo tayo sare leh.
Gaar technology seal kulul, si loo hubiyo in howlgal ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
isdaahirinta, gaaska Exclusive iyo dhamaystirka kulaylka technology isticmaalka qashinka dib, gaaska ku daahir yeelay waxaa loo isticmaali karaa nidaamka kulaylinta sida gaaska guban, kulaylka haray lagu dully isticmaali karo, xaqiiqsadeen in is-siin waayo reaction pyrolysis aan il dheeraad ah kulaylinta, si weyn loo yareeyo kharashka soo ordaya.
gaaska Qiiqa of line-soo-saarka ayaa la tijaabiyey, oo dhan Halbeegga hawada looga baahan yahay ee EU EEA ee Midowga Yurub iyo US EPA.
line-soo-saarka oo dhan ay qaataan PLC gacanta caaqil, digniin, qaylo iyo shaqada auto-saxo, caymiyaan hawlgalka hoos xaaladda ammaanka.
looga baahan yahay Low waayo, shaqaale, xoojinta shaqada iyo wax soo saarka Low nadiif ah.
Chart la barbardhigo "Marka la barbardhigo xaaladda technology hadda u dhexeeya guriga iyo dibadda"
faahfaahinta Emission waafaqsan Heerka EEA ee caadiga ah EU iyo EPA Maraykanka ee
oo keliya xarunta soo xulay si waafaqsan isticmaalka dhamaystiran xaaladaha helitaanka warshadaha taayirrada qashinka saartay MIIT
Batanteyaasha Core (Overseas)
Batanteyaasha Core (Domestic)
Previous: nidaamka muxaadaro Oil Best High-Quanlity Products
Next: qashinka lagu qubo qashinka dib caag Best High-Quanlity Cheap Products
S: Waa maxay awoodda u dhaxeysa oo aad siin kartaa?
A: Waxaan ku siin yaabaa 10000T / Y} 20000T / Y} 30000T / Y iyo awoodaha waaweyn
S: waxa noocee ah nidaamyada ku siin karaa?
A: Industrial Turos Duugga Sii Pyrolysis Production Line, Industrial Sii qashinka caaga Pyrolysis Line, Nidaamka muxaadaro Oil, Carbon Black dheeraad ah System Daaweynta
S: Shuruudaha Space The?
A: Sida for a line 10,000T / Y, aqoon-isweydaarsiga ee qaybta pyrolysis waa 48 * 20 * 9, kaas oo marka laga reebo workshops taayirrada (ama caag ah) qalqal iyo waxyaabaha dhammeeyey daaweynta
S: Shuruudaha Shaqada?
A ㄩ shaqada No loo baahan yahay inta lagu guda jiro soo saarka, laakiin kaliya in ay gacanta ku, kormeerka iyo gaadiidka. Sida for a line 10,000T / Y, waxay u baahan tahay oo ku saabsan 3-4 ku hawshootay / wareejin
S: Delivery Time?
A: Sida for a line 10,000T / Y, waxa loo baahan yahay oo ku saabsan 5-6 bilood
S: shirkadda ku siin doonaa Rakibaadda ayaad jeceshahay iyo leexo-Key Project?
A: Waayo Europe ah inaannu isku filan nahay si ay u bixiyaan rakibo ayaad jeceshahay iyo leexo-Key Project, waayo dalalka kale iyo gobolada kale oo aan ahayn Europe, waxaan siin kartaa rakibo kormeerka, komishanka iyo adeega tababarka shaqada.
S: Sidee baad u cadayn karaysaa in technology iyo qalab ka mid yahay kuwa ugu horumarsan iyo xasilloon oo duurka ku?
A ㄩ Waxaan ku adkaysanayaan in la isu geeyo theoretics iyo dhaqanka ee soo koraya our technology. Waxaan leenahay waayo-aragnimo sanado badan hawlgalka la taaban karo ee warshadda pyrolysis oo waxaan ka helay oo sameeyey hagaajinta iyo wax ka beddelid sida. At Dhanka kale ah, waxaan leenahay macaamiil badan oo ganacsi iyo joogto ah orodka * dhirta ee dalal kala duwan.
S: Ma laga yaabaa in aad bixiso booqashada goobta ee warshadda orodka aad?
A: Haa, waxaan ku siin kari lahaa warshad jira macaamiisha * s aad booqasho goobta.
S: Waa maxay codsiyada oo saliid ah iyo carbon madow
A: faahfaahinta The saliidda soo saaray line-soo-saarka our pyrolysis joogto ah waxaa waafaqsan SH / T0356-1996 No 4 Light Shiidaalka Oil. Saliidda soo saaray uu qiimo kulayl sare iyo content baaruud yar yahay, in la isticmaali karo in lagu gubashadeeda, matoor iyo saliidda cayriin, waayo, muxaadaro iwm saliidda ka dib markii habka muxaadaro lagu saleyn karo xawaaraha engine weyn awood yar naaftada, injineernimada iyo gaadiidka beeraha / badda injineer iyo cayn kasta oo matoorrada.
Waayo, codsiga ah Carbon Black, fadlan nala soo xidhiidh si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah
duugga ah qubo pyrolysis taayirrada
qashinka dhirta pyrolysis taayirrada
qashinka lagu qubo pyrolysis taayirrada
qashinka mashiinka pyrolysis taayirrada
Next: Qashinka caaga Pyrolysis Machine la Operation buuxda Continuous
Duugga Sii System Turos Pyrolysis
High Faa'iido Qashinka Turos Recycling Plant
Hot Iibinta Oil Pyrolysis turxaan Machine
caaga Rubber Machine
Pyrolysis Shiidaalka Oil Qalabka
Plant Pyrolysis In Gujarat
Pyrolysis Plant caaga qashinka
Duugga System Turos Pyrolysis
duugga ah Turos Recycling Machine
duugga ah Turos Pyrolysis Makiinado
Tech Qashinka Turos Recycling Plant
Turos Oil Pyrolysis
Turos Pyrolysis Oil Plant
Turos Recycling Machines Si Oil
Turos Recycling Plant Si shidaalka Oil
Waxaa loo adeegsaday Turos Recycling Pyrolysis Machine
Qashinka caaga turxaan Si shidaalka Oil
Duugga qashinka caaga Turos Pyrolysis
Qashinka Turos Recycle Si shidaalka Oil
qashinka Turos Recycling Si shidaalka Oil Machine
Qashinka Turos Recycling Machine Si Oil
turxaan Turos qashinka Si Shiidaalka Oil
Turos Qashinka Si Diesel Plant
Taayirada qashinka Si Shiidaalka Recycle
Technology Latest warshadaha laguu Sii ...
Output Oil High Turos Qashinka Sii inay shidaal O ...
Laalid Turos Pyrolysis la Runtii Industrial Ogow ...
4804 Greenland Center, 25 Gongqingtuan Rd, Degmada Shizhong, Jinan, Shandong
Halkee wasaqda waa in Turos Ugu dambeyntii Hel?
hambalyo diiran guddiga cusub Niu ...
Niutech New Website rasmiga Online